Yan Aung: ဘလော့ဂ်တန်းပလိတ်များကို ချဲ့ခြင်း (၁)
ဘလော့ဂ်တန်းပလိတ်များကို ချဲ့ခြင်း (၁)
ကျွန်တော်တို့တွေ မတွေ့ဖြစ်တာလည်း အတော်ကြာသွားပြီနော်. နေကောင်းကြတယ်ဟုတ်.
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော့်ကို မေးလ်ပို့ပြီး မေးလာတဲ့ ဘလော့ဂါညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေရင်း အားလုံးကို ပြန်မျှဝေချင်တဲ့ နည်းပညာလေးတစ်ခုအကြောင်း ရေးချင်ပါတယ်.
ဒီနည်းကို ဒီနေရာမှာ ရေးထားတာ တွေ့ဖူးပါတယ်. အခု ကျွန်တော်ကတော့ ညီအစ်ကိုတို့နဲ့အတူတူ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရင်း ရှင်းပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. တန်းပလိတ်တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပေမယ့် အိုင်ဒီယာက အတူတူပါပဲ.
ရှေ့ဆက်မသွားခင် အားလုံးသိချင်နေမယ့် မေးခွန်းတစ်ခုကို အရင်ဆုံးဖြေပါမယ်.
ဘာကြောင့် တန်းပလိတ်ကို ချဲ့ချင်ရတာလဲ..
အဖြေကရှင်းပါတယ်. နဂိုပေးထားတဲ့အရာက ကျဉ်းနေလို့ပါ. ကိုယ်က ဒီ့ထက် ကျယ်ကျယ်ပိုလိုချင်လို့ပါ. ဒီ့ထက်ရှင်းတဲ့အဖြေရှိမယ်လည်း မထင်တော့ဘူး. ဟတ်ဟတ်.
ကျွန်တော် နည်းနှစ်နည်းခွဲပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.
(၁) ရိုးရိုးတန်းပလိတ်များကို ချဲ့နည်းနဲ့
(၂) Rounder Template များကို ချဲ့နည်း ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပါတယ်.
အခု ရေးမှာကတော့ နံပါတ်တစ်ဖြစ်တဲ့ ရိုးရိုးတန်းပလိတ်များကို ချဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
ကဲ. ကျွန်တော်တို့ စလိုက်ကြရအောင်လား…
ကျွန်တော်တို့ကို Blogger က ပေးထားတဲ့ တန်းပလိတ်ရိုးရိုးလေးတွေထဲက Minima Ochre ဆိုတဲ့ တန်းပလိတ်လေးကို ရွေးလိုက်ပါမယ်.
Layout Tab လေးထဲက Edit HTML ကိုသွားပြီး အဲဒီ့တန်းပလိတ်လေးရဲ့ CSS Coding ပိုင်းလေးကို အရင်ဆုံး လေ့လာကြည့်ပါမယ်.
ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာ တန်းပလိတ်ချဲ့တဲ့ အိုင်ဒီယာလေးကို အလွတ်သဘော စဉ်းစားကြည့်ကြပါမယ်.
ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်း (၃) ပိုင်းရှိပါတယ်. ဘာတွေလဲဆိုတော့
Outer-wrapper ဆိုတာရယ် Main-wrapper ဆိုတာရယ်နဲ့ Sidebar-wrapper ဆိုတာရယ်ပါပဲ. တန်းပလိတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း အဲဒီ့သုံးခုက တန်းပလိတ်ချဲ့မယ်ဆို သိထားရမယ့် Key Players တွေပါ. 2-column-template ဆိုရင် sidebar တစ်ခုပဲ ပါမယ်. 3-column-template ဆိုရင်တော့ left and right sidebars တွေပါမယ်ပေါ့ဗျာ.
တစ်ခြားသိထားသင့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေကတော့ header-wrapper, content-wrapper စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ဗျာ.နော်.
အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Minima Ochre တန်းပလိတ်လေးမှာ Outer-wrapper ဆိုပြီး ရှာကြည့်လိုက်ရင် ဒါမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်.
အဲဒါကို ဘယ်လိုနားလည်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုပြီး ခေါင်းစားမနေပါနဲ့. ကျွန်တော်တို့ သိရမယ့်အရာ သုံးခုပဲ ရှိပါတယ်. အဲဒီ့သုံးခု ဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲဆိုတာကို နားလည်ထားရင် တန်းပလိတ်ချဲ့နည်းကို ၅၀ % လောက် သိပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်. ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဂလိုပါ.း)
Main-Wrapper + Sidebar-Wrapper+Space Between = Outer-Wrapper
ခေါင်းတွေခါကုန်ပြီလား.း)… ပြန်ရှင်းပြပါမယ်.
အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တန်းပလိတ်မှာ ဘာလေးတွေတွေ့လဲဆိုတော့ Width:660 px စတာလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဟုတ်တယ်ဟုတ်.
410 +220 + Space between Main and Sidebar wrapper = 660
Space between Main and Sidebar wrapper = 660-(410+220) = 30
ဒါကြောင့် Space between Main and Sidebar Wrapper ဟာ 30 px ဖြစ်ပါတယ်.
Outer-wrapper ဆိုတာက တန်းပလိတ်ရဲ့ ဘယ်ဖက်အစကနေ ဟိုး ညာဖက် အဆုံးထိတွက်ချက်ထားတာပါ. သူ့အောက်မှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ ပို့စ်ရေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ main-wrapper (or) content-wrapper ဆိုတာပါတယ်. ပြီးတော့ အဲဒီ့ Post Area နဲ့ Sidebar ကြားမှာ လပ်နေတဲ့ Space လေးပါတယ်. အခုတန်းပလိတ်မှာ အဲဒီ့ Space လေးက 30 px ရှိတာပေါ့. ပြီးတော့ကာ sidebar-wrapper ပါတယ်. အဲဒီ့သုံးခုပေါင်းလိုက်ရင် outer-wrapper နဲ့ ညီရပါမယ်. မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တန်းပလိတ်ကြီးဟာ အချိုးအစားမညီမျှတာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်.
ကဲ. ဒါဆိုရင် အိုင်ဒီယာရပြီပေါ့နော်. ကျွန်တော်တို့က ပို့စ်ရေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ main-wrapper (သို့) content-wrapper နေရာကို ချဲ့ရမှာပါ. သူ့ကိုချဲ့သလောက် Outer-wrapper ကိုလည်း လိုက်ကြီးပေးဖို့ လိုပါတယ်.
ထားပါတော့ဗျာ. အခုကိစ္စမှာ Outer-wrapper က 660 px ဖြစ်ပြီးတော့ main-wrapper က 410 px ပဲရှိတယ်. ကျွန်တော်က အဲဒီ့ main-wrapper ကို နောက်ထပ် 200 px ထပ်ပေါင်းချင်တယ်. ဆိုလိုတာက 410+200 = 610 px ဖြစ်ချင်တာပေါ့.
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ထပ်ပေါင်းထည့်မယ့် နံပါတ်က 200 px ဖြစ်နေတယ်. အဲဒီ့ကောင်ကို Outer-wrapper မှာ ပြန်ပေါင်းထည့်ပေးဖို့ လိုပြီပေါ့. ဟုတ်တယ်ဟုတ်.
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွက်ချက်မှုက ဒီလိုဖြစ်လာပါတယ်.
Main-wrapper = 410+200 = 610
Outer-wrapper = 660 + 200 = 860
Sidebar-wrapper = no change
Space Between = no change
အပေါ်က ကုဒ်ဒင်းလေးတွေနေရာမှာ တစ်ခါတည်း အစားသွင်းလိုက်မယ်နော်.
အဲဒီ့အတိုင်းပြင်ပြီး တန်းပလိတ်ကို Save လိုက်ပါတယ်. ကဲ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Result ကို ပြန်ကြည့်ရအောင်.
၀မ်းသာအားရဖြစ်သွားတဲ့ မျက်နှာလေးက တစ်စုံတစ်ခုကို တအံ့တဩစိုက်ကြည့်ရင်း မေးချင်နေပြီထင်တယ်.
ကျွန်တော်သိတယ်. ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်လည်း အတွေ့အကြုံက ရင်းပြီး သင်ယူလာခဲ့ရတာမို့ အကုန်လုံးကို မပြောပြဘဲ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိစေချင်လို့ပါ. ဒါမှ နောက်နောင် ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိရှိ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန်းစစ်အဖြေရှာတတ်လာမယ် မဟုတ်ဘူးလား.
စေတနာကို နားလည်ပါဗျာ. နော်.
နားမလည်လည်းနေတော့… ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဆက်ပြောပြမယ်. ဟတ်ဟတ်.
တန်းပလိတ်ရဲ့ Post Area ကတော့ ကျယ်သွားပါရဲ့. ဒါပေမယ့် Header က လိုက်မကျယ်ဘဲ ကျန်နေခဲ့တယ်.
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမေးသင့်လဲ.
Header ကို ထိန်းထားတဲ့ coding တစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ်.
Alright! Let’s go, baby!
တန်းပလိတ်ထဲကို ပြန်သွား… Header-wrapper ဆိုပြီး ရိုက်ကြည့်လိုက်တော့
လားလား ( မြင်းမဟုတ်ပါ)
သူ့ရဲ့ width က 660 px တဲ့. ကဲ. ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲ
တန်းပလိတ်ကို မချဲ့ခင်က main-wrapper (or) content-wrapper ရဲ့ width က ဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲ. ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်.
610 px တဲ့..
အင်း… ဒါဆိုရင်တော့ header-wrapper နဲ့ main-wrapper မဆက်စပ်ဘူး. နောက်ထပ်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရအောင်. ဘာတွေ့လဲ
Outer-wrapper ကလည်း 660 px ပဲ.
There you go!... We made it…
ဒါကြောင့် Outer-wrapper နဲ့ Header-wrapper ဟာ အတူတူပဲ. ဘလော့ဂ်တန်းပလိတ်ကို ချဲ့ရင် Outer-wrapper ကိုတင်မကဘူး. Header-wrapper ကိုပါ လိုက်ရှာပြီး ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်.
Header နေရာဟာ တကယ်တော့ Banner နေရာနဲ့ အတူတူပါပဲ. ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာ ဘန်နာလေးတွေ တင်ပြီးသားဖြစ်နေခဲ့ရင်လည်း အဲဒီ့ဘန်နာကိုပါ လိုက်ပြီး ပြန်ချဲ့ပေးဖို့လိုတယ်လို့ မှတ်ရပါမယ်.
ကဲ. Header-wrapper ကို Outer-wrapper ရဲ့ width အတိုင်းပြင်ပြီနော်.
တန်းပလိတ်ကို Save လိုက်မယ်. ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ခုန်စွာ ပြန်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား.
Look at that…..
C’mon, man! Who’s your daddy?
လို့ ကော့ထားတဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးကို ကိုယ့်ညာဖက်လက်နဲ့ ဘန်းခနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်စမ်းပါ. ပြီးတော့ကာရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး မြန်မာပြည်က Rapper ပေါက်စတွေ စတိုင်လ်မျိုးဖမ်းလို့ မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့ ကိုယ့်အခန်းထဲ ပတ်ပတ်လည် လမ်းတစ်ပတ်လောက် လျှောက်လိုက်စမ်းပါ.
Rounder Template တွေကို ချဲ့နည်း ကျန်သေးတယ်. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.
Sidebar-wrapper ကို ချဲ့ချင်လည်း ရပါတယ်. Sidbar နဲ့ Main ကြားက Space ကို အတိုးအလျှော့ လုပ်ချင်လည်း ရပါတယ်. ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် Outer-wrapper ရဲ့ width ကို မကျော်ရင် ပြီးတာပါပဲ. ကျော်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ကျွန်တော့်ကို မမေးနဲ့. ကိုယ်တိုင်သာစမ်းကြည့်…
ကျွန်တော်ကတော့ မျိုးကြီးရဲ့ သီချင်းလေးနားထောင်ရင်း ငြိမ့်နေလိုက်မယ်.
ကဲ. အားလုံးပဲ ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေသတည်း….
မျိုးကြီး သီချင်းအသစ်လား :))
ပြန်လာပြီး နဲနဲဆောင့်ကြွားကြွားများဖြစ်လာသလားလို့ စာမေးပွဲတွေ ဘာတွေများအောင်လာခဲ့သေးလား။
Stage ပေါ်မှာ Rapper စတိုင် လမ်းလျှောက်ပြပြီး ရယ်ရွှင်ပြုံးစရာတွေနဲ့ ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်း သင်ပြသွားတဲ့ ဆရာလေးလိုပါပဲ.. တကယ်ကို အသင်အပြ ကောင်းပါပေ့..
ရှင်းတာမှ ရှင်းရှင်းရှင်းရှင်း နဲ့ကို နေတော့တာပဲ..
>Talkii... မသစ်ရပါဘူးဗျာ. အရင်အတိုင်းပါပဲ.း)
>KOM... ကျွန်တော်လည်း မြင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်. ဘာကြောင့် ကျွန်တော်က ဆောင့်ကြွားကြွားဖြစ်ရမှာလဲ မခင်ဦးမေရယ်...
>ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်... ရှင်းတာလက်ခံပါတယ်. ဘွင်းတော့ မဘွင်းလိုက်ပါနဲ့ဗျာ.. အွတ်..အွတ်..အွတ်.. :)
ကိုရန်အောင်ကျေးဇူးနဲ့ ဘလော့ရဲ့တန်းပလိတ်ကို ချဲ့ကြည့်လိုက်တာ။ မတတ်တဲ့သူ(ကိုယ်ပေါ့)အတွက်အရမ်းအဖိုးတန်ပါတယ်။ နောက်လည်းအဲလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေပြောပြပေးပါအုံးနော်...
အနုပညာဆိုင်ရာနှင့် သုတ ဘလော့ဂ်တွေသိရင် ပြောပြပေးပါ...